नवलपरासीमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
नवलपरासीमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा
२०७० कार्तिक २६, मंगलवार ०२:२१ गते
नवलपरासी । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा नवलपरासी चुनावमय बन्दै गएको छ । पहिलो निर्वाचनमा दुई क्षेत्रमा क्रमशः नेपाली कांग्रेस, एनेकपा माओवादी र एक÷एक क्षेत्रमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल विजयी भएको यस जिल्लामा अहिले भने त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
पहिलो निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न नसकेको नेकपा एमाले भने अहिले कडा चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिएको छ । मधेसी पार्टी टुटफुटको राजनीति भएकाले अहिले जित हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ ।
०६४ सालको निर्वाचनमा चार लाख २८ हजार मतदाता रहेको नवलपरासीमा २ लाख ७३ हजार ६७१ मत खसेको थियो । जसमध्ये २ लाख ५८ हजार ९५९ मत मात्र सदर भएको थियो । जम्मा खसेको मतको आधारमा ०६४ को चुनावमा तत्कालीन माओवादीले जिल्लाभरिमा ६५ हजार ९७२ मत प्राप्त गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले ६३ हजार ७४० र नेकपा एमालेले ३४ हजार ९९९ मत प्राप्त गरेको थियो ।
मत परिणामको आधारमा जिल्लामा तत्कालीन माओवादी पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा एमाले तेस्रो पार्टी बनेका छन् । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले क्षेत्र १ र २, एनेकपा माओवादीले क्षेत्र ३ र ४ मा जित हात पारेका थिए भने मधेसवादी दल मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र तराई मधेश लोकतन्त्र पार्टीले क्षेत्र ५ र ६ मा बाजी मारेका थिए । पहिलो निर्वाचनमा मतपत्रमा भएको त्रुटी र फर्जी मत खसेकोले अहिले पुरानो अवस्था नरहने विश्लेषण गरिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शंशाक कोइराला एमालेका दीपक अधिकारी क्षेत्री र एमाओवादीका धनप्रसाद सापकोटा चुनावी मैदानमा रहे पनि कांग्रेसका कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गर्न एनेकपा माओवादी र नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई अफ्ठयारो परेको छ ।
कांग्रेसका कोइराला अघिल्लो निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट बिजयी भएका थिए । क्षेत्र १ मा कांग्रेसको पकड रहेकाले अन्य दललाई प्रतिष्पर्धा गर्न अफ्ठयारो परेको हो । । एक स्वतन्त्रसहित विभिन्न दलका १६ जना उम्मेदवारहरु रहेका छन् ।
जिल्लाको क्षेत्र २ मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका पूर्वसचिव महेन्द्रध्वज जिसी चुनावी मैदानमा छन् । जिसी, एमालेका जीवन श्रेष्ठ र एमाओवादीका मोती रिजालबीच त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि कांग्रेसका जीसीको अवस्था बलियो देखिन्छ । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा जिसीले एमालेका श्रेष्ठलाई ३६७ मतले पराजित गरेका थिए । अहिले पनि काँग्रेसका जिसी र एमालेका श्रेष्ठबीच कडा प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ । ३ स्वतन्त्रसहित विभिन्न दलका २२ उम्मेदवार मैदानमा छन् ।
क्षेत्र ३ मा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली, एमालेका पूर्वजिल्ला कमिटी सचिव कृष्ण पौडेल, एमाओवादीकी पूर्वसभासद् सीता पौडेलबीच त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा एमाओवादीकी पौडेलले चुनाव जितेको सो क्षेत्रमा यसपटक पार्टीको विभाजनपछि एमाओवादीको अवस्था कमजोर भएकाले काँगे्रस र एमालेको प्रतिस्पर्धा रहने देखिन्छ । ३ स्वतन्त्रसहित २५ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।
क्षेत्र ४ मा कांग्रेसका पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल एमालेका बैजनाथ चौधरी र एमाओवादीका चिनक कुर्मीबीच प्रतिस्पर्धा हुुने देखिन्छ । २०५१ र २०५६ सालमा कँडेलले विजय प्राप्त गरेकोले यो क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसले स्थिति बलियो भएको बताइन्छ तर, कांग्रेसका बागी उम्मेदवार गुणनिधि तिवारी चुनावी मैदानमा उत्रेपछि कँडेलको स्थिति कमजोर देखिएको छ । सो क्षेत्रमा ६ स्वतन्त्रसहित ३३ जना उम्मेदवारहरु रहेका छन् ।
क्षेत्र ५ मा कांग्रेसका विक्रम खनाल, एमाओवादीका राजु हरिजन, एमालेका दीपेन्द्र अधिकारी क्षेत्री र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य पूर्वरक्षाराज्यमन्त्री रामवचन यादवबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । कांग्रेसका उम्मेदवार विक्रम खनालकाविरुद्व राधेश्याम पाठक बागी उठेपछि कांग्रेसको स्थिति कमजोर छ भने फोरम लोकतान्त्रिक पनि फुटेकाले फेरि चुनाव जित्ने सम्भावना कम रहेको देखिन्छ ।
कडा प्रतिष्पर्धा भने नेकपा एमालेका दिपेन्द्र अधिकारी क्षेत्री र एनेकपा माओवादीका राजु चमारबीच हुने देखिएको छ । यस क्षेत्रमा १४ स्वतन्त्रसहित ३९ जना उम्मेदवारहरु छन् ।
त्यस्तै, क्षेत्र नं. ६ मा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी चुनावी मैदानमा छन् । त्रिपाठीको सधँै बर्चश्व रहेको यस क्षेत्रमा पार्टी फुटका कारण कार्यकर्ताको मत विभाजन हुने भएकोले यसपटक त्रिपाठीको अवस्था कमजोर भएको स्वयम् कार्यकर्ताको भनाइ छ । अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा काँग्रेसका देवकरण कलवार त्रिपाठीसँग १ सय ७५ को झिनो मत अन्तरले पराजित भएका थिए । यसपटक त्रिपाठीका मुख्य कार्यकर्ताले पार्टी छाडेपछि काँग्रेसका कलवारको स्थिति बलियो मानिएको छ ।
कुल ३ लाख १७ हजार ७ सय ४५ मतदाता संख्या रहेको नवलपरासीमा तेस्रो लि¨ी गीता सैथवारसहित ३७ स्वतन्त्र गरी कुल १ सय ७४ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।